Wararka - Abuuritaanka aagag cusub oo badeecado ah
Abuuritaanka aag cusub oo badeecado ah
Bishii Maajo ee 2020, The Besttone co., Ltd waxay aasaaseen waax cusub- waaxda alaabada ilaalinta dibadda. Bilaabista cilmi-baarista iyo horumarinta alaabada ilaalinta dibadda.
20-kii sano ee la soo dhaafay, Besttone wuxuu u koray ganacsi ballaadhan oo baaluq ah oo loogu talagalay dharka baaritaanka iyo horumarka. Awoodda maalinlaha ah ayaa ka badan 1000pcs dharka iyo awoodda wax soo saarka maaskaro ee maalinlaha ah ayaa ka badan 10000 kumbiyuutar. Ka dib markii la ururiyey ilo kala duwan, iyo isku dhaca xoogga iyo tiknoolajiyada qaangaarka ah, shirkaddu waxay si rasmi ah u gasho wax soo saarka cusub ee duulimaadka ah waxayna bilaabaysaa horumarinta alaabada ilaalinta dibadda. Waxsoosaarka waxaa ka mid ah: dharka dibadda iyo qalabka kale ee difaaca dibadda, sida galoofyada, jilbaha, curcurka, suxulka, maaskaro, maaskaro wajiga, boorsooyinka dhabarka, boorsooyinka dhexda, boorsooyinka gacanta, koofiyadda diiran, qoorta, teendhada, bacda jiifka, furaashyada, jawaanka alaabta , daboolka roobka iyo wixii la mid ah. Wax soo saarka oo dhan wuxuu gaari karaa heerka tayada caalamiga ah. Sidoo kale waxaan soo saari karnaa wax kasta oo uu macaamilku u baahan yahay. Kani waa waaxdeenna kale: Qeybinta shakhsi ahaaneed shaqsiyeed. Waxay ka dhigan tahay inaan soo saari karno badeecadaha uu macmiilku u baahan yahay. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad noo sheegto magaca sheyga, midabka, cabbirka iyo ujeeddada. Markaa waxaan bilaabi doonnaa inaan ka shaqeyno samaynta shaybaarka shakhsi ahaaneed adiga. Dabcan waxay ka koobnaan doontaa maaddada saxda ah, cabbirka saxda ah iyo ujeeddada saxda ah ee ugu muhiimsan illaa intaad ku qanacsan tahay.
Bulshada casriga ah, isboortiga banaanka ayaa ku soo kordhay caan ka noqoshada heerka dhaqaalaha bulshada iyo awooda nolosha dadka. Dad aad u tiro badan ayaa bilaabay inay fiiro gaar ah yeeshaan iskuna dayaan howlaha banaanka. Waxaa ka mid ah orod, baaskiil wadid, fuulid buur, socod dheer, iwm. Mareykanka gudihiisa, isboortiga banaanka ayaa ah isboortiga seddexaad ee ugu caansan kaqeybgalka iyo wax soo saarka. England waligeed waxaa loo yiqiinay "hoyga isboortiga", sidoo kale waa goob muhiim ah oo dhalasho isboorti casri ah. Hadda, isboortiga bannaanka oo ah isboorti ku habboon xilliga firaaqada, waa hab bilaash ah oo aan caadi ahayn oo isboorti ah Waana mid caan ka ah dal kasta oo dadweyne ah. Horumarka waddan kasta, isboortiga banaanka ayaa noqday habka ugu wanaagsan ee xilliga firaaqada loogu talagalay dadka adduunka oo idil. Taasi waa sababta aan u horumarinay alaabada dibadda. Waxaan sidoo kale rajeyneynaa in badeecadaheena banaanka ay ku xoogeysan doonaan saameynta isboortiga banaanka.
Marka Our Besttone waxay leedahay koox cilmi baaris cusub, waxayna leedahay koox wax soo saar u heellan, sidoo kale waxay leedahay adeeg diiran muddo 20 sano ah, waxay si kal iyo laab ah u soo dhaweyneysaa dhammaan macaamiisha iyo asxaabta u imaaneysa shirkadeena inay soo booqdaan oo ay iskaashi yeeshaan. Waxaan dib kuugu soo celin doonnaa tayada wax soo saar ee ugu sarreysa iyo adeegga ugu daacadsan.
Waqtiga boostada: Nofeembar-11-2020
2F, Guusha Dhismaha Ganacsiga, MAYA 22 Shiqing Road, Degmada Xinhua, Shijiazhuang 050071, Gobolka Hebei, Shiinaha.
Wixii weydiimo, su'aalo ama amaano ah, fadlan
nala soo xiriir maanta